Ghana · Novambra, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Ghana · Novambra, 2018
Tantara mikasika ny Ghana tamin'ny Novambra, 2018
Andrana bilaogin-dahatsary avy any Accra
Mediam-bahoaka30 Novambra 2018
(Marihina fa tamin'ny volana Jolay 2005 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy) Ity ny androko faharoa tao amin'ny cybercafe BusyInternet tao Accra, Ghana, ary nanandrana ny famintinana lahatsary aho mba hahitako raha azoko atao ny mamolavola ny halehibe mety handefasana sy hitrohana lahatsary. Miadana kokoa noho ny any Etazonia ny fifandraisana eto,...
Ny WSIS Youth Caucus any Ghana
Mediam-bahoaka28 Novambra 2018
Vao nahavita ny antsafa nifanaovana tamin'i Leopold Armah sy Regina Banini avy ao amin'ny WSIS Youth Caucus any Ghana aho, nifampiresaka momba ny andraikitry ny tanora Afrikana ao amin'ny Fihaonambe Iraisam-pirenena momba ny Fiarahamonin'ny Fampitam-baovao nokarakarain'ny Firenena Mikambana. Manasa anao hihaino ny rakipeo i Andy.
Ghana: Namantampatatra ilay Liberiana nisy namono
Liberia28 Novambra 2018
Nisy mpaka sary iray nanaparitaka ny sarin'ny lehilahy Liberiana iray nisy namono hita tao ivelan'ny Tobin'ny Mpitsoam-ponenana Buduburam ao Ghana. Tsy hita ato amin'ny lahatsary ny saripika.
Hetsika manohitra ny Fahantrana ao Ghana: ”Mijoro i Afrika”
Mediam-bahoaka16 Novambra 2018
Maherin'ny 300.000 ny olona nivangongo tao amin'ny Kianjan'ny Fahaleovantena tao Accra Ghana ny Sabotsy 3 Septambra 2005 mba hanatrika ilay hazakazaka an-kira naharitra 15 ora, Kaoseritra "Mijoro Manohitra Ny Fahantrana i Afrika", nanasongadinàna ireo mpanakanto Afrikana sangany, olontsotra malaza ao amin'ny fiarahamonina ary mpanentana manohitra ny fahantrana
Fahasalamàna07 Novambra 2018
Ny Tohin'ny Dia tany Accra #2
Ny podcast-ko farany avy ao Ghanà manazava ny antony tsy nahitàna ahy tanatin'ny aterineto nanomboka ny tolakandron'ny Zoma lasa teo.